ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်‌တောရေးရာကဏ္ဍနှင့် သတ္တုရေးရာကဏ္ဍ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်၊ နေပြည်တော်
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် သစ်‌တောရေးရာကဏ္ဍနှင့် သတ္တုရေးရာကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၃:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၈) ရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Virtual Online စနစ် ဖြင့် ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (ပထမအကြိမ်) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်(ပထမအကြိမ်) လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည်။
အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းက ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် သက်တမ်း(၈)နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များကို
နေပြည်တော် ၊ ၅−၁−၂၀၂၁
အမျိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ငလိုက်စခန်းသာဆင်စခန်း တောတွင်း ဖြတ်လျှောက် လမ်း(သစ်သားတံတား)နှင့် ကြိုးတံတားတည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ သစ်တောစိုက်ခင်းများနှင့် ငလိုက်စခန်းသာ ဆင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအားစစ်ဆေး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် (၁၉.၁၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ကော်စီနယ်မြေ၊ နေပြည် တော်-ကံပြားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၂/၀)အနီး၊ ငလိုက်ကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)အတွင်းရှိ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မိုးရာသီတွင်စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကသစ်မာ မန်ဂျန်ရှားသစ်မျိုး စိုက်ခင်း (၅၀)ဧက စိုက်ခင်းအောင်မြင်ရှင်သန်နေမှုများအား သွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှု့ခဲ့ပြီး စိုက်ခင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လိုအပ်သည်များအား ဆွေးနွေးမှာကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် စိုက်ခင်းယာယီရှင်းလင်းဆောင်တွင် တာဝန်ရှိသူများမှ စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက် အကြံပေးဆွေးနွေးမှာကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းရှိ သစ်တောစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းကျောင်းနှင့် ယန္တရားပင်မအလုပ်ရုံတို့အား ကြည့်ရှု့စစ်ဆေး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ၁၂.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ သီရိရတနာလမ်း၊ အရိုးရောဂါ အထူးကုဆေးရုံကြီးအနီးရှိ ၂၀၁၈ခုနှစ် မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ထားသည့် ဌာနပိုင် ဝါးနှင့် သစ်မျိုးစုံ (၃၁၂) ပင် စိုက်ခင်းအားလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ထားသည့် ဝါးမျိုးစုံစိုက်ခင်း (၁၃၈) ပင်နှင့် အရိပ်ရပင် (၂၇၆)ပင် စိုက်ခင်းတို့အားလည်းကောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးပင်များ ရှင်သန်ကြီးထွားရေး နှင့် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အရိပ်ရပင်များ ဖြည့်တင်းစိုက်ပျိုးရေးတို့အတွက် လိုအပ်သည်များ အား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်နှင့် သစ်တောသုတေသနဌာနတို့ရှိ သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ (၅.၁၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်အတွင်းရှိ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် တက္ကသိုလ်သင်ကြားရေး ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာ/ ဆရာမများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Riikka Laatu မှVideo Conferencing စနစ်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Riikka Laatu နှင့်အဖွဲ့ အား ယနေ့ ၁၇-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
Group of 77 (G-77) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျော့နည်းသက်သာစေရေး ၂၀၃၀ အစီအစဉ်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု နည်းပါးသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းစဉ်အား ထိန်းကြောင်းခြင်း ဝန်ကြီးအဆင့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂတွင် ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တို့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် Group of 77 (G-77) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျော့နည်းသက်သာစေရေး ၂၀၃၀ အစီအစဉ်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု နည်းပါးသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းစဉ်အား ထိန်း ကြောင်းခြင်း (MaintainingaLow Carbon Development Path towards the 2030 Agenda in the era of COVID-19) ဝန်ကြီးအဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (Virtual Flagship Ministerial Meeting) အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးအား ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၉)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၇:၃၀) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Statement on the documents for the legality of timber in Myanmar
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Hilde Solbakken မှ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Hilde Solbakken နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ သံမှူးကြီးဖြစ်သူ Mrs. Lise Nordgaard တို့အား ယနေ့ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်း၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။